Maka ndị na-ebudata ugbo elu site na Rikooo ma na-enweghị atụmatụ ma ọ bụ textures
Maka ndị na-ebudata ugbo elu site na Rikooo ma na-enweghị atụmatụ ma ọ bụ textures 2 afọ 4 ọnwa gara aga #995
Achọpụtala m ọtụtụ ndị nwere nsogbu na nbudata site na saịtị a, bụ ndị na-efu ederede ụgbọ elu, ma ọ bụ taịl ojii na faịlụ fotoreal. Ka m buru ụzọ kọwaa ntakịrị ihe FSX. Microsoft ji usoro atọ pụta na mgbakwunye ọkpọ. Ọkọlọtọ FSX, FSX Deluxe, na N'ikpeazụ FSX Mbipụta ọla edo. Ọ bụrụ n ’ịnwere ọkọlọtọ FSX ma ọ bụ Deluxe Editions na emelitebeghị ha, ị ga-enwe nsogbu na ụfọdụ ụgbọ elu na ntụle. Microsoft weputara na ngwugwu ọrụ 2 (SP1 & SP2) na-enweghị arụnyere mmelite ndị a, a ga-enwe nsogbu. Onye na-ebu ibu nke Rikooo na-enye ọrụ nke ọma. Ana m enye gị patịị ndị ịchọrọ n'okpuru, iji nyere gị aka idozi nsogbu ndị a. Enwere m olileanya na ọ ga-enyere aka
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: 40 tuncayboran